स्वास्थ्य Archives » Page2of3» Nepal Europe News
Home > स्वास्थ्य (Page 2)
मृगौला पीड़ितलाई न्यू जीलैंडबाशीले सहयोग जुटाउदै
NepalEurop January 17, 2016 January 17, 2016 प्रवास, विविध, स्वास्थ्य	0
गुल्मी । २१ बर्षको छोरा । त्यही पनि मृगौला रोगबाट ग्रसित । उपचार गर्दा गर्दा भएको सम्पति पनी सकियो । अहिले छोराको उपचार खर्चको माग्दै हिड्नु पर्दा कस्को पो मन नारोला र ? अहिले यस्तै भएको छ गुल्मी जिल्ला तुरागा गाबिस वडा न ७ का शृजना श्रेष्ठलाई । उनको छोरा मृग्रेद श्रेष्ठ
यौन क्षमताले बताउँछ, कति बाँच्ने
Ishwor Bhandari January 10, 2016 स्वास्थ्य	0
बेडरुममा पुरुषले आफ्नो पुरुषत्व प्रदर्शन गर्न सकेन भने मानिसको दाम्पत्य जीवनमा असर गर्छ भन्ने भनाई अब नयाँ रहेन । तर कम उत्तेजित हुने मानिसको आयुमा समेत असर गर्ने नयाँ तथ्य भेटिएको वैज्ञानिकहरुले दाबी गरेका छन् । कम उत्तेजित हुने पुरुषमा छिट्टै मृत्यु हुने ७० प्रतिशत सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ
बच्चा जन्माएपछि कसरी सुखमय बनाउने यौन जीवन ?
सन्तानलाई जन्म दिएपछि यौन जीवनको उत्साहप्रद चरण सकियो भन्ने ठान्नु हुँदैन । बरु, यसलाई अझ उत्साहमय बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि केही उपायः मासिक चक्रलाई पर्खिनुस् बच्चालाई जन्म दिएको केही महिनापछि महिनावारी पुनः सुचारु हुन थाल्छ । सँगसँगै सेक्समा सरिक हुने महिलाको चाहना पनि बढ्दै जान थाल्छ । महिलामा आएको यस्तो
मोदी सरकारको भारतमै चर्को आलोचना
NepalEurop December 8, 2015 December 8, 2015 स्वास्थ्य	0
काठमाडौं । नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीका कारण भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारको चर्को आलोचना भएको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ । भारतीय राज्यसभामा सोमबार नेपालसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि बहस गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता दल युनाइटेड, बिजु जनता दल र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका सभासद्ले नेपालमाथि लगाइएको
भारतमा युद्ध थाल्ने आइएसको चेतावनी
NepalEurop December 4, 2015 December 4, 2015 प्रमुख समाचार, स्वास्थ्य	0
इस्लामिक अतिवादी संगठन ‘इस्लामिक स्टेट’ (आइएस)ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘हिन्दु अतिवादी’को आरोप लगाउदै अबको युद्ध भारतमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आइएसको घोषणापत्रमा उसले यस्तो बतायको हो । ‘अब यो अभियान भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान लगायतका मुलुकमा विस्तार हुनेछ’ आइएसको घोषणापत्रमा भनिएको छ । घोषणापत्रमा भारतको राजनीतिक अवस्थाको
NepalEurop March 24, 2015 Uncategorized, स्वास्थ्य	0
NepalEurop March 24, 2015 Uncategorized, समाचार, स्वास्थ्य	0